Nmeputa mmanu di nkpa | Ndị na-ere ahịa | AromaEasy
Mmanụ ndị dị mkpa: gịnị ka ha bụ?
Emeputa mmanụ dị mkpa
Ha bụ lipids sitere na ihe ndị sitere n'okike dịka okooko osisi, mkpụrụ osisi, ogbugbo osisi, mkpụrụ na mgbọrọgwụ. Amụrụ mmanụ ndị a iji ghọta uru ha na njiri mara ha niile. Otu n'ime ha isi USES bụ iji melite nlekọta anụ ahụ, mana ejirila usoro dị iche iche mee ihe maka iji ahụike, ụtọ na izu ike.
N’agbanyeghi na ha nwere mmanu mmanu, ha adighi ka mmanu akwukwo nri nke eji eme nri. Ha nwere otu molekul dị iche iche ma nwee njiri nke ha. Na mgbakwunye, mmanụ dị mkpa ị siri ike na-esi ike ịchọta n'ọtụtụ buru ibu n'ihi na ha chọrọ ka emepụta ọtụtụ nke ihe ndị bụ isi, yabụ usoro ịzụrụ ahịa siri ike karịa iji mmanụ oriri.
Etu esi eji mmanu di nkpa
Nlekọta akpụkpọ anụ: nke a bụ otu n'ime isi USES nke mmanụ ndị a; Enwere ike itinye ha n'ọrụ na anụ ahụ, yana n'ihi vitamin na mineral ha, ha na-enyere hydrate epidermis aka. Ha na-amị mmiri nke ọma, yabụ ha anaghị ahapụ mmanụ uto.
Ghichaa oghere iku ume gị: mmanụ dị mkpa na -emepụta vapors na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ uhere dị ọcha nke na-ehicha akwara iku ume gị ma nyere gị aka iku ume nke ọma.
Uru nke iji mmanu di nkpa
ihe ndị dị mkpa mmanụ
Mmanụ ọ bụla dị mkpa na-enye ọtụtụ uru dị iche iche, na agbanyeghị nke ngosipụta isii ị họọrọ, ọ nweghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị lee uru ya anya ma nwee ahụmịhe dị mma na ha.
Nọrọ jụụ mgbe ụbọchị siri ike: ọtụtụ n’ime anyị nwere ụbọchị ọjọọ, mana n’ikpeazụ, ọ bụrụ n’ọkụ n’ọkụ dị mkpa, ị ga - akwụsị ichegbu onwe gị.
Melata ahụ gị na uche gị, na-etinye ọtụtụ nrụgide na akọnuche gị n'ahụ; Ngwọta kachasị mma bụ ịhịa aka ma ọ bụ saa ahụ site na enyemaka nke isi nke mmanụ dị mkpa.
Ihi ụra ka nma: nweta ezigbo ura nke abali n’enweghi obi erughị ala ma obu rọọ nrọ nke nwere obere mmanụ dị mkpa ahọpụtara n’akụkụ ahụ niile.
Nchegbu: ị aụ ọgwụ a everyụ ọgwụ kwa izu nwere ike ịdị ka a ga - asị na nrụgide na - amalite inye ndụ gị nsogbu; Bido jiri usoro dị iche iche mee ihe kachasị na ya.
Gburugburu ebe ihunanya: ị na - eme atụmatụ iso onye ị hụrụ n'anya na-akpa? Kedu ihe ga-abụ ihunanya karịa mmanụ anyị dị mkpa? Họrọ ihe masịrị gị ịmepụta ikuku dị mma.
Mgbu mgbu: ọ bụrụ na ị na-arịa mgbu na nkwonkwo ma ọ bụ akwara mgbu, ịhịa aka na mmanụ dị mkpa bụ ụzọ kachasị mma iji nyere anụ ahụ na uche aka site na usoro ọgwụgwọ okike.
Enyemaka na nzukọ: ịfụ mmanụ dị mkpa tupu nzukọ ma ọ bụ nnọkọ dị mkpa nwere ike inyere gị aka ilekwasị anya na ọrụ ndị ga-eme n'ọdịnihu.
Lelee mmanụ anyị dị mkpa
Anyị na-ewebata mmeghe mmanụ mmanụ dị iche iche isii, nke ọ bụla nwere uru na ihe ya.
Eucalyptus akara ojii dị mkpa 0.5 oz.
lavender nwa usoro mkpa 0.5 oz.
lemongrass nwa usoro mkpa 0.5 oz
Na ose nwa usoro mkpa 0.5 oz
Oroma na mkpa usoro usoro 0.5 oz.
Mmanụ tii nwa usoro mkpa 0.5 oz.
Nke a na ntinye e gwa ke Mkpa mmanụ. Bookmark na Permalink.